DOWNLOAD Lockheed Martin F-16 Na-alụ ọgụ agụ nkwọ ajụala FS2004 - Rikoooo
Lockheed Martin F-16 Na-alụ ọgụ agụ nkwọ ajụala FS2004
downloads 15 651
The F-16 Na-alụ ọgụ agụ nkwọ ugbo elu bụ a multi-ọrụ fighter mepụtara site na United States n'oge 1970s. -Achịkwa ihe karịrị 20 mba dị iche iche, wuru n'okpuru ikikere na Turkey, South Korea na otu ìgwè nke anọ NATO mba, na F-16 na 2009 bụ fighter kasị eji na ụwa. 4 300th oyiri napụtakwara na April 2006  na mmepụta ga na ọbụna ruo mgbe 2010s n'ihi na mbupụ. (Source Wikipedia)
The F-16 Na-alụ ọgụ égbé ahụ bụ nke mbụ ụgbọelu aerodynamically ejighị n'aka site design, nke na-enye ezi maneuverability, ma na-achọ FBW. Na otu dị ike chernobyl, ọ bụ bi-supersonic, na ya Ọdịdị nwere ike itinye uche anyị dum ruo 9G.
Kokpiiti nwere ọtụtụ ihe dị mkpa innovations tụnyere gara aga dinta:
- The pilot oche e weturu na 30 ° iji nagide ibu ihe
- The nnukwu curved iko na-enye ndị magburu onwe 360 Celsius visibiliti maka ndi oru ugbo
- The joystick na-positioned mpụta, na nwere ọtụtụ iwu na a HOTAS (n'aka On trotul Ma Stick)
- The ọdịdị multifunction egosiputa mfe ọgụgụ ọmụma.
The F-16 Na-alụ ọgụ agụ nkwọ ajụala bụ awsome na zuru ezu na ọtọ! Ihe niile bụ n'ebe ahụ, ọ bụ graphically mara mma. Download ya ozugbo.
Udidi Royal Danish Air Force
Nke a ngwugwu e dere a Rada na a isi-elu nchọta onyonyo (VTH) site Eric Marciano, a Rada bụghị n'ihi na free, enweghị m ọzọ ha pụrụ ime karịa nke a payware Rada, Otú ọ dị, ị nwere ike nwalee ya maka 5 nkeji, mgbe ahụ, a ozi ga-adọ aka ná ntị gị na ị chọrọ a aha igodo. Ị nwere ike N'ezie anọgide na-efepụ na F-16 ma na-enweghị Rada ma ọ bụ zụta a isi site na nke a njikọ:
The Rada bụ dị mma nke ukwuu
Lockheed Martin F-16 Na-alụ ọgụ agụ nkwọ FS2004